तीन सजिलो चरणहरूमा म्याकमा पढ्ने रिसिप्टहरू कसरी बन्द गर्ने। - म्याक
आईफोन ५ भर्खरै कालो भयो
आईफोन6मा भ्वाइसमेल प्राप्त छैन
के अर्को मेरो आईफोन मा ठाउँ लिईरहेको छ
तीन सजिलो चरणहरूमा म्याकमा पढ्ने रिसिप्टहरू कसरी बन्द गर्ने।
तपाईले चाहनुहुन्न कि व्यक्तिले तपाईले कहिले म्याकमा सन्देशहरू पढ्नु भएको हो भन्ने कुरालाई थाहा होस्, तर तपाइँ यो कसरी गर्ने भन्नेमा निश्चित हुनुहुन्न। पढ्ने रसिदहरू बन्द गरेर, मानिसहरूलाई कहिले पनि थाहा हुँदैन यदि तपाईंले उनीहरूको iMessages पढ्नु भएको छ भने! यस लेखमा, म तपाईंलाई देखाउने छु तीन सरल चरणहरूमा म्याकमा पढ्ने रसिदहरू कसरी बन्द गर्ने !
पढ्ने रसिद के हो?
पढ्नुहोस् रसीदहरू अधिसूचनाहरू हुन् जुन तपाईंको म्याकले तपाईंले iMessages पठाउने मानिसहरूलाई पठाउँछन् भनेर तिनीहरूलाई सूचित गर्नुहोस् कि तपाईंले तिनीहरूको सन्देश पढ्नु भएको छ। जब पढ्ने रसिदहरू खोल्दछ, व्यक्ति तपाईंको मेसेजिंगले शब्द देख्दछ पढ्नुहोस् साथ साथै तपाईंले पहिलो पटक तिनीहरूको सन्देश पढ्नुभयो।
म्याकमा पढ्ने रिसिप्टहरू कसरी बन्द गर्ने
म्याकमा पढ्ने रसिदहरू बन्द गर्न, सन्देश अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र स्क्रिनको माथिल्लो बायाँ कुनामा सन्देश ट्याब क्लिक गर्नुहोस्। त्यसो भए, प्राथमिकता क्लिक गर्नुहोस्।
प्राथमिकताहरू क्लिक गरेपछि नयाँ मेनू तपाईंको म्याकको प्रदर्शनमा देखा पर्नेछ। क्लिक गर्नुहोस् खाताहरू यस मेनूको माथिल्लो बायाँ कुनामा ट्याब।
वाइफाइ आईफोन संग जोड्न सक्दैन
म कसरी आईफोन मा मेरो वाहक सेटिंग्स अपडेट गर्न सक्छु
अन्तमा, पढ्ने रसिदहरू पठाउने पछाडि बक्स जाँच गर्नुहोस्। तपाईंलाई थाहा हुनेछ पढ्ने रसिदहरू अन गरिएको छ जब तपाईं निलो बक्सको भित्र सेता चेकमार्क देख्नुहुन्छ।
जब म म्याकमा पढ्ने रसीदहरू बन्द गर्छु मानिसहरू के देख्छन्?
जब तपाईको म्याकमा पढ्ने रसिदहरू बन्द हुन्छन्, तपाईले सन्देश पठाउँदै गरेको व्यक्तिले शब्द मात्र देख्दछन् वितरित यदि तपाईंले खोल्नुभयो र तिनीहरूको सन्देश पढ्नु भयो भने पनि।
अब रसिदहरू पढ्ने छैन!
तपाईको म्याकमा तपाईले सफलतापूर्वक पढ्ने रसिदहरू बन्द गर्नुभयो र अब मानिसहरूले जान्दैनन् कि तपाईले आफ्ना iMessages खोल्नु भयो। अब जब तपाईलाई थाहा छ म्याकमा पढ्ने रसिद कसरी बन्द गर्ने भन्ने बारे, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले यो लेख सामाजिक मिडियामा साझेदारी गर्नुभयो ताकि तपाईका साथी र परिवारका सदस्यहरूलाई पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ! पढ्न को लागी धन्यवाद र तल टिप्पणी लेख्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् यदि तपाईको म्याकको बारेमा तपाईलाई केहि प्रश्नहरू छन् भने!